Maleeshiyaad ku dagaalamay deegaano ka tirsan Galgaduud oo la kala qaadey - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Maleeshiyaad ku dagaalamay deegaano ka tirsan Galgaduud oo la kala qaadey
Maleeshiyaad ku dagaalamay deegaano ka tirsan Galgaduud oo la kala qaadey
Ciidamada qalabka sida ayaa ku guuleestay in lakala qaado maleeshiyaadkii dhawaan ku dagaalamey inta u dhexeysa deegaannada Xinjilab iyo Bangeelle ee Gobolka Galgaduud.
Xildhibaano ka tirsansan labada aqal ee Baarlamaanka Faderaalka , Taliyaha qaybta 21-aad Gen: “Qooje” iyo saraakiil la socotay oo uu ka mid yahay Taliyaha qaybta Guud ee Booliiska Gobolka Galgaduud ayaa halkaasi gaarey kuwaa oo goobjoog ka noqdey tilaabada koowaad ee lagu kala qaaday maleeshiyaadka dagaalamey.
labada beelood ayaa Ku balamey in ay isugu yimaadaan gogol rasmi ah,iyadoo masuuliyada ilaalinta amaanka loo saarey Taliska qaybta 21-aad oo halkaa kasii howl galaya inta xal waara laga gaarayo colaadaasi.
Taliyaha qaybta 21-aad Gen: Qooje ayaa ciidanka amaanka Ku amray in ay masuuliyad taxadar leh ka qaataan in dadka soomaaliyeed ee dagaalamay lakala badbaadsho oo ciidanku mar kastaba isha Ku hayaan Dhaq dhaqaaqyada dadka reer miyiga ah.
Previous articlePuntland oo sameysay Guddi la xisaabtama Xirfadlayaasha Caafimaadka
Next articleXiisad dagaal oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan